Ntuzi Na ntaneti ihu igwe - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>Nri na egwu ihuenyo
edemede si: Nri na egwu ihuenyo | | oge: April, 2013 | mkpado: Nri na egwu ihuenyo
ntụgharị ihuenyo bụ ihe ọhụrụ. Site na akwa baosteel nchara sitere na nkà mmụta sayensị dị elu nke mba ndị ọzọ, site na ụlọ ọrụ Xuanshi na-arụpụta ọrụ nkwụsịtụ ihuenyo, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, nzizi dị mfe, ogologo ndụ na àgwà ndị ọzọ, coal, ciment, na ubi ndi ozo. Ọrụ ngosi ihuenyo magburu onwe ya: 1.The ihuenyo vibrating na-eji isolatio vibration ... GỤKWUO...
Xunashi vibrating feeder bụ ụdị usoro ntụziaka nri nri. A haziri ya ma mepụta ya ka ọ na-ebute ma ọ bụ na-ebute ihe dị iche iche, na-esi na ụlọ nkwakọba ihe ma ọ bụ na-ekpuchi ihe ndị na-enweta. Ka ọ dị ugbu a, ọ nwere ike mezue nyocha nke ihe ndị ahụ. Site na nchara ígwè site n'aka Baosteel, onye na-enye anyị nri na-agba ume, na-arụ ọrụ nwere ike ịdabere na ogologo ndụ. Ọrụ Nlekọta Na-enye Ọganihu na Njirimara: 1. Na-eguzogide na-eguzogide mgbanaka mkpara ... GỤKWUO...
Belt conveyor bụ ụdị ájá na ajịrịja nkume na-ejikarị eme ihe na-emegharị ma na-akụpịa osisi. Onye na-ebu belt na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịjikọta ụlọ ọrụ mmepụta ọ bụla, nke na-enyere aka ịghọta njigide na mmepụta nke mmepụta usoro, melite arụpụtaghị ma belata ike ịrụ ọrụ. Ọ bụ ngwaọrụ inyeaka a na-emepụta na-adabere na ụkpụrụ nkwekọrịta nke esemokwu. Ugbu a, a na-ejikarị ndị na-emepụta belt Xuanshi eme ihe na ntinye, nzụlite, kemịkal, ihe ọkụkụ, ihe owuwu ụlọ ... GỤKWUO...
Mmetụta na-emepụta eletrik magnetik
Ngwunye ọkụ eletrik eletrik na-arụ ọrụ bụ ụdị ọhụrụ nke ịnye ihe oriri nwere ike ịrụ ọrụ na-aga n'ihu. Ya mere, a na-ejikarị ya eme ihe na nsị, ịgbaze, coal, ụlọ, ụlọ ọrụ ọkụ, ụlọ ọrụ ọkụ, eletriki, igwe, nri, ọgwụ, na mmepụta nke ụlọ ọrụ ntanetị. A nwere ike iji ya dịka eriri ọkpọ, ọkpa na-ebuli ihe, simenti ciment, ciment ciment, crusher, crasher, na ọka viscid ma ọ bụ ike nke ngalaba ụlọ ọrụ ndị ọzọ, yana ... GỤKWUO...
Onye na-enye belt na-agụnye belt belt nke ndị rollers na-akwado. Ogologo nwere ike ịdị iche site na 1.5 gaa na 3 m na ọsọ site na 0.005 gaa na 0.5 m / s. Ngwa ikike dị iche na 3 ka 30 hp. Ụdị ụdị nri a dị mma maka oke nchịkwa nke ájá na ájá, na karịsịa maka ihe akọrọ na ihe ọma. Ọ nwere usoro dị mfe na dị ọnụ ala, dị mfe ịgbanwe. Ike a chọrọ bụ ike dị ala, a pụkwara ịchịkwa olu ahụ n'ime 1% site na ọdụm dịpụrụ adịpụ na ịnyagharị n'elu ọ bụla ibu. GỤKWUO...